पोखराका कवि एवं साहित्यकार विजय बजिमयको निधन, आज तुलसी घाटमा अन्त्येष्टि गरिने - Pokhara Post
पोखरा । पोखरेली साहित्यकार विजय बजिमयको निधन भएको छ ।पोखरेली युवा सांस्कृतिक परिवारका पूर्व अध्यक्ष समेत रहनुभएका साहित्यकार बजिमयको राजधानी काठमाडौँमा निधन भएको हो ।
स्व. वजिमयको शवयात्रा उहाँकै निवास महोरियाटोल बाट कार्तिक २९ गते बिहान ८ बजे निकालिने तयारी गरेको पोखरेली युवा सांस्कृतिक परिवारका अध्यक्ष मोती भुजेलले जानकारी दिनुभयो । मोहोरियाटोल,नालामुख,तेर्छापट्टि,गिरिजाचोक,धर्मशिलावुद्घबिहार,नदिपुरचोक,कन्या क्याम्पस,बालमन्दिर हुँदै तुलसी घाटमा स्व. वजिमयको अन्त्येष्टि गरिने भुजलले जानकारी दिनुभयो ।